Nkwupụta ọhụrụ nke NES Classic Edition | Akụkọ akụrụngwa
Ọkwa ọhụụ nke NES Classic Edition
E nwere oge pere mpe maka mwepụta nke NES Classic Edition, nke belatara nke ochie Nintendo console nke ga-ewetara anyị agbakwụnye 30 nke egwuregwu kachasị kpochapụla nke ewepụtara n'ahịa. Japaneselọ ọrụ Japan na-aga n'ihu na-abawanye hype ahụ ma kwupụta ọkwa ọhụụ ebe anyị nwere ike ịhụ interface nke njikwa a ga-enye anyị na mgbakwunye na egwuregwu ndị ga-adị n'ụbọchị ọbịbịa n'ahịa. Ihe njikwa a, dịka anyị gwara gị ihe karịrị otu ọnwa gara aga, agaghị enye gị ohere ịnụ ụtọ egwuregwu ndị anyị nwere ike ịme n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ anyị ma bụrụ naanị ndị na-esite n'ụlọ abịa.
Vidio ahụ na-egosi na NES Classic Edition ga-enye anyị ohere ịdekọ ihe egwuregwu 4 dị iche iche nke otu egwuregwu iji nwee ike ịlaghachikwute ha mgbe ọ bụla anyị chọrọ, mana ọ dị nwute na anyị enweghị ụzọ ọ bụla iji mepụta ma ndị ọrụ ga-amanye pịa Tọgharia bọtịnụ ịlaghachi na isi menu ma site n'ebe ahụ gaa egwuregwu na ajụjụ iji chekwaa ebe anyị hapụrụ.
Dị ka anyị pụrụ ịhụ na vidiyo ahụ, menu mmalite ga-abụ isi ihe eji arụ ọrụ nke ndị ochie niile Nintendo ga-etinye na ụdị NES belata. Ọ ga-agụnye ụdị ngosi ngosi dị iche iche atọ: CRT filter, nke na-e emomi echiche ụlọ akwụkwọ ochie nke egwuregwu NES, ọzọ na-enye anyị usoro 4: 3 nke telivishọn ochie na ọnọdụ Pixel nke pixel ọ bụla ga-abụ akụkụ zuru oke.
NES Classic Edition ga-abanye n'ahịa na November 11 ma wetara anyị egwuregwu 30 ọzọ, gụnyere Super Mario Bross, Kid Icarus, Castlevania ... niile maka $ 60. Nke a belatara ụdị nke kpochapụwo NES nwere ọtụtụ ballots na-a kasị mma-ere na-esote Christmas.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Ọkwa ọhụụ nke NES Classic Edition
Ana m ekele gị nke ukwuu maka nkọwa na aha m hụrụ na akụkọ ndị ọzọ. Ha na-aja a console mgbe ha na-na na na ya a ọnwa gara aga ihe mere ọzọ roms ike-atụkwasịkwara. Ndị mmadụ adịgboroja
iLDock, n'ihi ya, i nwere ike ikwu na iPhone 7 na-ege ntị music n'otu oge (site na USB)
Na Nọvemba, Windows 7 na 8.1 ga-apụ n'anya kọmputa ọhụrụ